वरको रुखमुनी ओत लाग्दा तप्केनी सहनुपर्छ
नबराज थिङ: नेपालमा यतिबेला एमसीसीका बारेमा सार्थक बहस भएको छैन । कुनै राजनीतिक दलहरूले औपचारिक रूपमा यो आवश्यक हो वा होइन भन्ने बारे निर्णय लिएका छैनन् । केही राजनीतिक दलका केही नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा एमसीसीका पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । नेतृत्वका असंख्य कमजोरीको दुष्चक्रमा लामो समयदेखि फस्दै आएको मुलुक हो नेपाल । भारतसँग गरिएका कोसी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सम्झौता जस्ता दर्जनौँ सम्झौताहरूमा नेपाल तल पर्दै आएको सत्य घामझैं छर्लङ्ग छ ।
जनस्तरबाट एमसीसीका विपक्षमा बलियो र पक्षमा कमजोर स्वर सुनिएको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारले यसको पक्षमा आफ्नो विचार राखेको छ, जुन नेपालको हितमा कदापि छैन । यो परियोजना अमेरिकाको देखाउने दाँत हो चपाउने दाँत होइन । अमेरिका विश्वमा जताततै आफ्नो प्रभुत्व कायम गराउन चाहन्छ । आर्थिक र सामरिक हिसाबले चीन अमेरिकी महत्त्वकाङ्क्षामा प्रमुख बाधक भएको जगजाहेर छ । अर्थात् चिनियाँ मनोविज्ञान नबुझी आफ्नो सरहद बाहिर आफू खुसी कुनै पनि काम गर्न अमेरिकालाई सहज छैन । चिनियाँ व्यापार देखेर अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू छक्क परेका छन् । चीनलाई उसका छिमेकीहरूबाट अप्ठ्यारोमा पार्न अमेरिकाले बुनेका कलात्मक जालहरूमध्ये इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) एक हो । आईपीएस अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो । आईपीएसकै महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा उसले एमसीसीको जाल नेपालमा फ्याँकेको छ । एमसीसीको जाल यति नाटकीय छ कि त्यसले न त नेपालको सार्वभौमसत्ताको ख्याल गर्छ न त नेपालको संविधान र कानुनको सम्मान गर्छ । अमेरिका एउटा अक्टोपस जस्तै हो जसले आफ्ना प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूलाई हरतरहले कमजोर पार्न र घेराबन्दी गर्न छिमेकी देशहरूलाई टाङमुनि राख्न चाहन्छ । प्रकारान्तरले एमसीसी हातमा मकैका दाना देखाएर खसी समात्ने र पछि गर्दन काट्ने नै
रणनीतिको प्रारम्भीक चरण हो अर्थात त्यसकै खोजी पनि हो ।
यी सम्झौताका पक्षमा बोल्नेहरूले नेपालको कायाकल्प हुने सपनाका अपत्यारिला पोकाहरू जनताका आँगनसम्म फ्याँकेका थिए । आखिर ती सबै सम्झौताहरू राष्ट्रघातमा रूपान्तरित भए । राष्ट्रको महत्वलाई गहिरो गरी नबुझ्नेहरूले दिएका तत्कालीन अभिव्यक्तिहरु समयले केही दशकमै परीक्षण गरेकाछन् र तिनीहरू फेल भए । एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कुनै पनि संवैधानिक निकायमा बोलाएर यस्तो सम्झौता किन
गरेको भनेर सोध्ने कामसमेत भएको छैन । जिम्मेवार मानिसहरू आफूले गरेका कामको जस वा अपजसको भागीदार हुनै पर्छ । यसका लागि देउवा र कार्की एमसीसी सम्झौताका प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । जनताको प्रतिक्रियाले एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ । तसर्थ पनि कार्की र देउवामाथि गहिरो अनुसन्धान गर्ने र दोषी देखिए मुलुकको प्रचलित कानुन बमोजिम कडा दण्ड दिन हिचकिचाउनु हुँदैन । नेपालको सार्वमौमसत्ता, संविधान र कानुन, नेपालको बौद्धिक सम्पत्ति तथा स्वतन्त्र देशको अस्तित्वलाई निकम्मा बनाएर गरिएको सम्झौतामा देश हित देख्नेहरूलाई मेरो एउटा सुझाव छ या त तिमीहरू एकपटक डा. सन्दुक रुइतकोमा गएर आँखा जँचाऊ या त देश र जनतासँग आफूले गरेको गद्दारीको क्षमा याचना गर । कुनै एउटा नागरिकले देशको प्रचलित कानुनको पूर्णतः परिपालना गर्नुपर्दछ । कानुनको
परिपालना नगर्नेले दण्ड भोग्न तयार हुनुपर्दछ । कार्की र देउवाले गरेको राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताबाट राज्यको स्वाभिमानमा पुगेको क्षतिप्रति सजाय अपरिहार्य छ । पैसा पाइन्छ भन्दैमा बेच्ने छुट कसैलाई छैन । गैंडाको खाक बेच्ने, गाँजा चरेश कारोबार गर्नेलाई, ट्राफिक नियम नमान्ने, बत्कारी, सुन तस्करलाई कारबाही गर्ने देशमा देशको अस्तित्व बेच्नेलाई कारबाही किन नहुने ? तिनीहरूको अपराध देश, जनता र भावी पुस्ताका निम्ति घातक छ । अपराधको सजाय पाउने हकदार भनेको सम्बन्धित अपराधी नै हो । अपराधको राष्ट्रियता हुँदै हुँदैन । ५५ अर्बको लोभमा देशको अस्तित्व धरापमा पार्नेहरू बस्न लायक ठाउँ । अझ अमेरिकी साम्राज्यवादको वृक्ष वरको रूखजस्तै हुन्छ । जसका फेदमा रोपिएको खोर्सानीले घाम लाग्दा छाया र पानी पर्दा तप्केनी सहनुपर्छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण नियतीको शिकार हुनबाट देशलाई जोगाउनुको विकल्प छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमसीसीको पक्षमा उभिनुले उनी माथि शङ्काका दर्जनौँ प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । टनकपुर सम्झौता गर्दा उनी जे भन्थे त्यस्तै आशयका स्वरहरू उनका मुखबाट सुनिएको छ । भीम रावल र देव गुरुङले एमसीसीका विरुद्धमा निरन्तर बोलिरहँदा ओलीले यसका गुण दोषबारे बुझ्न र बुझाउन सकिरहेका छैनन् । आम सचेत जनताहरूले एमसीसी नेपालमा नल्याऊ । जनताहरू यो पनि भनिरहेका छन् कि एनसेलको ७२ अर्ब कर उठाऊ र त्यसमा लगानी गर जुन काम तिमी एमसीसीको पैसाले गर्न खोजिरहेका छौँ । हुनसक्छ सोझा अडान लिएको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी दुष्चक्रको शिकार बन्ने खतरा एमसीसी प्रकरणको कार्यान्वयनले निम्तन सक्छ । यसर्थ एमसीसी र आईपीएसबाट टाढै बस्नु मुलुकका निम्ति श्रेयष्कर हुन्छ । यो लेख आजको सन्देश जनप्रिय खबवारमा छापिएको छ ।
(लेखक, नेकपा सिन्धुलीका नेता हुन् ।)
Times 1159647	Visited.